Kedu otu esi eme nnyocha nyocha nke ọma na Amazon?
Nnyocha nchọpụta bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi kachasị mma nke Amazon nke a ga-eme n'oge mbụ nke ngwaahịa gị na-agbanye na Amazon. Usoro a gụnyere ịchọ ọchụchọ niile dị mkpa ma dị elu nke nwere ike ime ka azụmahịa gị dịkwuo elu. Ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị okwu ọ bụla kwesịrị ekwesị ndị ahịa gị nwere ike iji chọta ngwaahịa gị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ọ bụ isi ihe ịga nke ọma dị ka mkpa ngwaahịa ahụ na njụ-ajụjụ ọchụchọ nke onye ọrụ ga-ekpebi site na mkpa nke okwu ọchụchọ ndị dabeere na ndepụta. Ọ bụrụ na i leghaara anya ma ọ dịkarịa ala otu ederede ọchụchọ, mgbe ahụ ohere gị ga-apụta na nsonaazụ ọchụchọ maka otu ajụjụ nke onye ọrụ ahụ ga-ebelata. Iji zere ịla azụ na ahịa ndị ị chọrọ iji nyochaa ọchịchọ ọchụchọ Amazon ma mee ndepụta nke okwu ọchụchọ kachasị mkpa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ isi mee nchọpụta nke Amazon dịka pro. Atụmatụ niile a dabeere na ahụmịhe nkeonwe anyị. Ya mere, anyị nwere ike ịkpọ ha dị irè ma dị mma.
Atụmatụ na ngwá ọrụ ndị ga - enyere gị aka ịhazi njirimara Amazon
Ụzọ kachasị achọpụta ihe kachasị mkpa na Amazon bụ itinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ ndị ahịa gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji malite nyocha ọchụchọ gị na iche echiche banyere ihe ndị ọkachamara nwere ike ịchọta iji chọpụta ihe gị. Ị kwesịrị iburu n'uche ihe ndị dị ka mgbe ha ga-azụta ngwaahịa gị, ụdị ajụjụ ha ga-enwe, na ụdị ụdị ihe ha nwere ike ịzụta karịa ngwaahịa gị.
Chịkọta okwu ọchụchọ niile ga-abata n'uche ma nyochaa ha site na ịntanetị ịntanetị iji hụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ngwaahịa gị. Ọ ga - enyere gị aka ime mgbanwe ụfọdụ dị mkpa maka ndepụta gị ma mezue ya. N'ebe a, ị ga-enwe ike ịchọta ụfọdụ okwu, acronyms, na abbreviation nke a na-ejikarị eme ihe n'obodo.
Ị chetụla otu esi eji Amazon maka nyocha ọchụchọ? Ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị ị ga-etinye akwụkwọ ozi ole na ole n'ime igbe ọchụchọ ahụ ma ngwaahịa ga-apụta ozugbo dị ka aro. Ọrụ arụmọrụ a agaghị enye gị ikikere data ziri ezi n'ihi na ọ na-egosipụta usoro ọchụchọ maka ọtụtụ. Otú ọ dị, ịnwere ike ijide n'aka na a ga-enye gị nyocha ọchụchọ ziri ezi nke nwere ike ịbanye n'ime ndepụta ngwaahịa gị.
Ikwesiri ịkọwa na ndidi site na iji arụmọrụ a. Ịkwesịrị ịgbaso aha ngwaahịa gị na mkpụrụedemede nke mkpụrụ okwu ma deba ama ihe ga-abịarute. Ị ga-achọta okwu ọchụchọ kachasị mkpa ma dị ike nke na-akasị tụnyere ihe ị na-ere ahịa. Ọzọkwa, usoro a na-atụ aro nwere ike inyere gị aka ịchọta ìgwè ndị ọzọ iji depụta ngwaahịa gị na.
Dịka ntụziaka ntụziaka nke Amazon, ngwaahịa gị ga-ahụ naanị site na ọchụchọ ndị ahụ ị tinyere na ndepụta na azụ gị. Ọ pụtara na ị ga-agụnye ọ bụghị naanị nchịkọta okwu dị elu na ndepụta gị ma jikọtara mkpokọta mkpịsị ogologo oge nke ga-eme ka o nwekwuo ohere ịnweta ndị ahịa gị.Otú ọ dị, ị ga-eme ya nanị na ikpe ma ọ bụrụ na ị nwere ohere ọzọ maka isiokwu. Ụzọ mbu gị kwesịrị iji kpuchie okwu ọchụchọ na-akọwa ngwaahịa gị.
Ndị ọkaibe na ngwaahịa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọchụchọ ndị kachasị mkpa ma ghara itinye oge na mgbalị dị ukwuu, ị nwere ike ime otu nyocha nhazi. Enweghi ike ighota ihe omuma akwukwo nke a. Chọọnụ okwu ndị a na nchịkọta ngwaahịa, bọtịnụ, na nkọwa. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta mkpụrụ okwu bara uru ị na-echeghị. Jide n'aka na ejiri ya na aha (f. e. maka mmanu mmanu; maka akọrọ akpụkpọ anụ; maka ụmụ nwanyị, wdg. )
M na - ekwu mgbe niile na ike nke synonymizer a abụghị nke a na - bara uru. Ngwá ọrụ a nwere ike ịba uru ọ bụghị naanị maka ndị na-asụ asụsụ mana kamakwa maka ndị ahịa Amazon. Ọ bara uru karịsịa ma a bịa na ngwaahịa ndị nwere ike ịnwe karịa otu aha, ma ọ bụ enwere ike iji ha mee ihe dị iche iche. Thesaurus nwere ike ịnye gị ụdị okwu dị iche iche na nkwupụta.
Iji ngwá ọrụ a maka nchọpụta isiokwu, ị ga-eburu n'uche ihe ndị a:
jiri ụdị okwu dị iche iche;
chọọ okwu ndị na - akọwa ihe ị na - ere ahịa;
echefula ichefu ihe nlele;
agbalịa ịchọta n'ebe ahụ okwu ndị ahụ maka aha aha.
Ngwa nchịkọta isiokwu
Ihe niile e kwuru na mbụ maka nyocha usoro nwere ike ịdị irè ma ọ bụrụ na ị nwere naanị otu ngwaahịa ma ọtụtụ oge nkịtị. Otú ọ dị, ha nwere ike ịnye gị otu ihe ahụ dịka ngwá ọrụ nyochaa isiokwu. Ọ bụrụ na ịnwe ọtụtụ ngwaahịa na nzaghachi gị ma chọọ ịkwalite ahịa gị, ọkachamara Amazon search engine ga-adị nnọọ mma maka azụmahịa gị.
Google bụ nnukwu search engine na ụwa, ebe Amazon bụ nnukwu maka nchọpụta ngwaahịa. Ọ pụtara na ọtụtụ ọchụchọ ọchụchọ na Google ga-adị ka Amazon. Iji ngwá ọrụ a eme ihe, ị nwere ike ịchọta ihe ndị ahịa gị nwere ike ịchọta na ịchọta okwu ọchụchọ ị ga-achọ maka nkwụnye ụgwọ Amazon gị-kwa-pịa. Ngwaọrụ a nweere onwe ya iji ma nwee ike ịnye gị data kachasị na weebụ. Iji GKP, ị ga-enwe ike ịlele nyocha ọchụchọ nke ọchụchọ gị ezubere iche maka yana nyochaa njirimara ogo gị. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịdị njikere na data GKP nwere ike ịdịtụ iche maka Amazon, n'ihi ya ị ga-achọ ịgbanwe ya.
Ya mere, Google Keyword Planner bụ ihe aghụghọ mana o nwere ike ịbụ ihe ịma aka iji. Ọzọkwa, ọ chọrọ akaụntụ AdWords.
SEMRush bụ ọkachamara na-eme nchọpụta isiokwu nke ga-enyere gị aka nweta ogologo ọdụ okwu ọchụchọ nke dabeere n'ọtụtụ nyocha na ndị nchọpụta. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike nledo ndị na-asọ gị ma chọpụta ihe ọchụchọ na-eme ka ha nweta okporo ụzọ. Nke kachasị mma bụ na ọ nwere ike igosi ọnọdụ gị dịka ọkwa Source .